Abavelisi beFani abangenabala, iFanitshala engenabala engenabala - Aihome
Ngathi kunye neQela lethu
Isixhobo sokulungisa izixhobo
Umatshini oPhatha umoya
Itekhnoloji yokuvelisa ukukhula
Sinamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda engaphezulu kwama-300, kubandakanya amalungelo awodwa omenzi wechiza angama-25, amalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezulu kwama-50.
Kwi-HK AIHOME OEM Solution siyaqonda ukuba ujonge ukuthatha imveliso yakho uyithengise ngenkonzo efanelekileyo kunye nemisebenzi.
Iimpawu ezaziwayo kwihlabathi liphela ziye zasebenzisana neHK AIHOME ukukhetha kunye nokuvelisa iimveliso zabo, kunye nokukhulisa ishishini labo.
Isixhobo seKhaya esiSebenzayo
I-HK AIHOME izinikele ekwakheni iqonga lonikezelo lwasekhaya jikelele, elijikelezwe sisixhobo esisempilweni nesilungileyo, ukubonelela ngeemveliso zekhaya eziphezulu kunye neenkonzo zobungcali kubathengi behlabathi. Ukubonelela ngezona zisombululo zibalaseleyo zesixhobo sasekhaya kubathengi behlabathi, ukusebenzisana kunye sinokukunceda ukuba uphumelele kwishishini lakho.
Ukwakhiwa kweSmart Scene
Iimveliso zamva nje nezishushu
Kushushu kwaye kupholisa iNqaba yeFanitshala
I-fan fan ngokufudumeza kunye nokupholisa ibonelelwa ngoyena mthengisi mkhulu wenqaba eTshayina, ixabiso le fan lenqaba elixoxayo. Esi shushu sombane fan heater ngokudibanisa ukupholisa kunye nemisebenzi yokufudumeza yeyona fan inqabileyo kwi-intanethi.
INqaba yoMoya yokuCoca uMoya ngePholile kunye nesiFudumezi
Isicoci somoya kunye nefutha yesifudumezi ngesicoci seHEPA esinezixhobo zokucoca umoya kunye nemisebenzi yefeni. Le fan enecebo lokucoca ulwelo ngesantya esilungelelanisiweyo kunye nokucwangciswa kobushushu kunokuvuthela umoya obandayo kunye nobushushu.
Idesika yoMcoci ococekileyo weFan
Ishushu kunye nokubanda fan ngomsebenzi wokucoca umoya, i-3 kwi-1 yefeni engenasiphelo, isifudumezi kunye nesicoci somoya. Le fan ingenasiphelo ingenazingca iqulethe isihluzo se-HEPA kwaye singenziwa ngokwezifiso umzi mveliso we fan yethu engenabala.
I-dehumidifier yesiqhelo inokufaka imisebenzi eyongezelelweyo efana nomsebenzi we-aromatherapy, umsebenzi wokucoca umoya kunye nomsebenzi wokucoca isibane se-UV. Esi sixhobo sokukhupha izixhobo singasetyenziselwa ukusetyenziswa komhlaba kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso kunye ne-MOQ.
Isicoci soMoya oyiSmart
Isixhobo sokucoca umoya seH13 HEPA sokucoca ulwelo kwizilwanyana nezilwanyana ezinobubele, ezinokucoca umsi, uthuli kunye nokuvunda. Esi sicoceko somoya sinendawo yokucoca umoya kubandakanya isihluzo sangaphambili kunye nesihluzi sekhabhoni kunye nesihluzi seHEPA.
Isikhuseli soMoya esiPhathekayo esiKrelekrele
Pisixhobo sokuhambisa umoya esimnandi sokuchukumisa ukuthamba kunye nokuboniswa okumhlophe kweLCD, inokujikela ngokuzenzekelayo ekhohlo nasekunene, phezulu nasezantsi jika ngesandla. Isixhobo somoya esihambisayo esine-Smart kunye nenkqubo yezindlu ezimbini kwaye inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi.
I-fan engenanto engena moya ...
Umlandeli ongenanto nge-Rem ...
Idesika enesicatshulwa eyiFa ...
Indawo engenazingcingo yeFani W ...
I-Turbo ejikelezayo iFan, ...
Indawo engenanto yeNqaba fan, C ...
Isicoci soMoya kunye nobushushu ...
I-Slim tower fan yomoya ...
Ucoceko lomoya kunye neBlade ...
Ucoceko lomoya olungenabala ...
I-fan engenanto nge-Hea ...
Engenanto Tower Fan Pu ...
Isicoci soMoya seMoto nge ...
Ukucoca umoya nge-HEPA ...
I-Smart Household Purifi ...
Isicoci soMoya kwiDesktop
Isixhobo sokulungisa izixhobo zeBasem ...
Eyona Dehumidifier ye ...
Zorhwebo / lokuhlambela de ...
Ingxolo ephantsi Dehumidifier ...
Isiko le-Smart Dehumidif ...
3 kwi-1 yoMoya oPhathekayo Co ...
Ukusetyenziswa Okuninzi ...
Ekupholiseni okungaphakathi ...
4 ngo-1 Uhlobo oluphathekayo A ...
Itekhnoloji ekhethekileyo yokuvala umlomo. Amava okuhamba komoya okunoxolo.
Izibane ezininzi zemood
Ukutshintsha kokukhanya kokukhanya okuphezulu kukhetho lwezibane ezi-4 ezahlukeneyo
Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi Ukunciphisa iindleko zamandla
Umsebenzi wexesha elakhelweyo
Isibali-xesha sokucima ngokuzenzekelayo. Akukho zityala zinzima zingalindelekanga.
I-HangKong Crossbow Brand (Zhejiang), iTekhnoloji Co Ltd yasekwa ngasekupheleni kuka-2020, kodwa umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-2004. Iqela lethu limiselwe ngokusekwe kwimishini yethu ephambili yokubonelela ngeenkonzo zorhwebo ezingcono kunye nezobungcali kubathengi behlabathi. I-HK AIHOME, indibaniselwano edibeneyo, idibanise ezona mveliso zaziwayo e-China kwaye izinikele ekwakheni iqonga lokubonelela ekhaya ngekhaya, elijikelezwe sisixhobo esisempilweni nesilumkileyo, ukubonelela ngemveliso ephezulu yasekhaya kunye neenkonzo zobungcali kubathengi behlabathi .
Igumbi 502, Ukwakha 5, 601 Qiuyi Road, Changehe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province